UCarmen Posadas: ungubani futhi yiziphi izincwadi esincoma ukuzifunda | Izincwadi Zamanje
Kunezikhathi lapho abanye ababhali baseSpain benza kahle futhi bathole ukuqashelwa ezweni abahlala kulo. Injalo-ke indaba kaCarmen Posadas, umbhali wase-Uruguay owenziwe waba yisizwe eSpain, lapho ahlala khona futhi engomunye wabaziwa kakhulu emhlabeni wezincwadi.
Kodwa, Carmen Posadas uyaba ubani? Iziphi izincwadi ozibhalile? Okulandelayo, sifuna ukukutshela ngalo mbhali futhi sixoxe nawe ngezinye zezincwadi zakhe. Impela ugcina ngokubathanda.
1 Ngubani uCarmen Posadas
2 Izincwadi zikaCarmen Posadas
2.1 Lord North Umoya
2.2 Umthengisi wamaphupho nezinye izindaba
2.3 Ama-infamies amancane
2.4 Namuhla i-caviar, kusasa ama-sardine
2.5 Inganekwane ye-pilgrim
2.6 Isifo sikaRebecca
Ngubani uCarmen Posadas
UCarmen de Posadas Mañé, ubunikazi bakhe bangempela, Wazalelwa eMontevideo, e-Uruguay. Wakwenza ngo-Agasti 1953 kepha empeleni uhlala eSpain, lapho ehlala khona. Uyise wayengusomaqhinga ngenkathi umama wakhe engumbuyisi. Ngenxa yomsebenzi kayise, wonke umndeni wasuka e-Uruguay waya e-Argentina, eSpain, eNgilandi, eRussia… kusukela eminyakeni eyi-12. Ungowokuqala ezinganeni zakubo ezine, amantombazane ama-3 nomfana.
Umsebenzi wakhe wokubhala waqala ngo-1980, ngesikhathi ebhala izincwadi zezingane nezentsha., izinhlobo ezimbili okwamanje ezingakhombi kangako noCarmen Posadas, ngoba amanoveli akhe aya kwenye indawo. Kodwa-ke, waziwa ngalezi zincwadi. Eqinisweni, ngo-1984 incwadi yakhe i-El Señor Viento Norte yanqoba iNational Prize for Literature.
Ngaphezu kokubhala izincwadi zezingane, ubuye wabhala imibhalo yamafilimu neyethelevishini, izindatshana ezihlekisayo, waze wabambisana nabanye ababhali ezinhlotsheni ezahlukene.
Njengoba iminyaka iqhubeka, kanjalo nenani lezincwadi zikaCarmen Posadas. Futhi kwathi ngo-1991 washicilela i-eseyi entsha, Ngubani okubonile futhi obonayo! Ngo-1995, inoveli ethi Izimpukane ezinhlanu eziluhlaza; ngo-1997, Akukho lutho olubukeka kanjalo, iqoqo lezindaba ezimfishane; noma ngo-1998 uPequeñas Infamias awina ngawo uMklomelo wePlaneta.
U-1999 bekungunyaka omubi kumbhali njengoba, ezinyangeni ezimbili nje vo behlukene, ulahlekelwe ngubaba nomyeni wakhe (uMariano Rubio).
Kancane kancane walulama futhi ipeni lakhe lashintsha laya kwirejista yabantu abadala. Futhi iqiniso ukuthi izincwadi aqala ukuzishicilela zazingasenzeli izethameli zezingane noma zentsha, kepha sezenzelwe umuntu omdala. Empeleni, ngo-2001 noLa Bella Otero, wathola ukuguqulwa kwefilimu.
Ngaphandle kokuthi uCarmen Posadas ubezinikela kakhulu kuhlobo lwamanoveli abantu abadala, uhlala enesikhala sokuthatha izindaba zezingane. Eyokugcina yi-My First Book on Machado, kusukela ngo-2009. Ngokwengxenye yayo, yamanoveli, eyokugcina eyashicilelwa yiThe Legend of the Pilgrim, kusukela ngo-2020.
Ngokuqondene nemiklomelo yokubhalwa kwemibhalo, uneqoqo elincane lesikweletu sakhe. Singaqhakambisa uMklomelo wePlaneta ngo-1998, uMklomelo Wezamasiko woMphakathi waseMadrid ngo-2008; noma umklomelo weBrazier, iGoncourt ka-2014 yeNovel yaseGastronomic yaseFrance.
Izincwadi zikaCarmen Posadas
Ukukhuluma nawe ngokulandelayo ngezincwadi zikaCarmen Posadas cishe kungapheli. Yize engabhalanga kakhulu njengabanye ababhali, uneqoqo elihle lemisebenzi yakhe. Ngokuqondile, futhi ngokususelwa kulwazi oluvela ku-Wikipedia, Ubhale izindaba zezingane ezingama-24, ama-eseyi ayisithupha, incwadi yezingxoxo nombhali uLucrecia King-Hedinger, namanoveli ayi-6 alandisa.
Kuzo zonke, siqokomisa okulandelayo:
Lord North Umoya
Un incwadi yezingane kusukela eminyakeni emi-3 lapho kukhulunywa khona indaba yezilwane ezithile okuthi, ngokubona ukuthi inyanga kaMashi ifike, zesabe ukubonakala kukaMnu North Wind owesabekayo, ngoba akayeki ukuvunguza.
Izingane ezimbili, u-Arturo noMaría, bazozama ukukholisa le ndoda ukuthi iyeke ukushaya ukuze kufike intwasahlobo.
Umthengisi wamaphupho nezinye izindaba
Ishicilelwe indlu yokushicilela i-Alfaguara (futhi akutholakali kalula manje), une-Merchant of Dreams nezinye izindaba, nguCarmen Posadas. Le ncwadi, egxile ezinganeni Iminyaka eyi-8-9, ilandisa ngo-Ahmet, umthengisi osemncane ohlangana nomthengisi. Lokhu kukunikeza amaconsi omlingo azokwenza ukuthi uye ezweni elihle lapho uzobe ucebile futhi unamandla. Kepha lawo maphupho afihla ingozi embi.
Ama-infamies amancane asibeka endlini yasehlobo yomqoqi wobuciko. Unquma ukuhlangana neqembu labantu futhi amahora ahamba ngendlela emnandi. Kuze kube izinto zingahambi kahle nobudlelwano bunobuthi, imishwana enezincazelo eziphindwe kabili namazwana "agangile" aqala ukuvela.
Namuhla i-caviar, kusasa ama-sardine
Le ncwadi siyigqamisa ngombhali ngoba bekusebenzisana nomfowabo, uGervasio Posadas. Incwadi izobala i- ukuzidela komndeni wakwaPosadas ngezindawo ezahlukahlukene abebehlala kuzo ngenxa yomsebenzi wobaba wabo. Kuyo, ababhali bazamile ukumela ukuthi injani impilo yomphathi, ngama-cocktails, ukudla kwasemini, ukudla kwakusihlwa, njll. kanye nokuphila "ngaphezu kwamandla abo" futhi bezama ukwenza isithombe esasingeyona into ababenayo.
Le ncwadi ingeyokugcina ukushicilelwa kuze kube manje nguCarmen Posadas. Futhi kuye, kude nalokho ongakucabanga ngesihloko, Iphathelene nendaba yegugu elibizwa ngeLa Peregrina. Liyiparele, elidume kunawo wonke. Ekuqaleni, yatholakala oLwandle lweCaribbean futhi yanikelwa kuFelipe II. Lokhu bekuyishiya njengefa lezindlovukazi ezahlukahlukene kwaze kwafika iMpi Yenkululeko eFrance. Lapho, uRichard Burton uqobo walinika u-Elizabeth Taylor.
Le ncwadi, ebhalwe ngobuhlakani kanye namahlaya, ifuna ukusebenza njenge- umhlahlandlela wokubamba izipoki zothando, njengoba isho esembozweni sencwadi. Futhi ukuthi lokho okuzama ukukufundisa ukuthola izithunzi zothando lwangaphambilini okungaba yimbangela yokuthi uqhathanise uthando lwakho olusha nolwedlule, noma ucabanga ukuthi lowo ungcono kunomunye.
Vele, ayifuni ukubenza babe yingxenye yempilo yakho, kepha ukuwaqeda bese uvula amakhasi unomphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UCarmen Posadas
UCarmen Pelaez kusho
Sawubona, ngifunda incwadi kaSira, futhi ngimatasa kancane. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngibone uchungechunge oluthi "Between seams" futhi ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula ukuthi uRamiro Arribas udlulile emhlabeni, nasencwadini ethi "Sida" waphinde wavela. Ngididekile.
Phendula uCarmen Pelaez
U-Araceli Cobos Reina kusho
Ngo-1999, uRafael Ruiz del Cueto, umyeni wakhe wokuqala nobaba wamadodakazi akhe amabili, abafanga, kepha umyeni wakhe wesibili uMariano Rubio. Ngikufisela okuhle.
Phendula u-Araceli Cobos Reina
Angiqondi ukuphawula kwakho. Intethelelo
Noelia Okuphuzi. Ingxoxo nombhali wenoveli yezothando
Usuku lwencwadi: izincwadi ezibalulekile okufanele zifundwe